မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Attention to Cherry May Karaoke, Singapore
Posted by mabaydar at 9:02 AM
မြန်မာဆိုင်တွေ အဲလို ဘေလ်ပိုပေါင်းတတ်မှန်း မသိဘူး။ ချက်ခြင်းဝယ် ချက်ခြင်းရှင်းဆိုင်တွေမှာပဲ အစားများလို့လေ.. နောက်ဆို သတိထားမှပဲ။
မြန်မာဆိုင်ကို မြန်မာ ပဲလာမှာပဲ မြန်မာဆန်ဆန်ပဲ service ပေးမယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ချယ်ရီမေကို တခေါက်မှ မရောက်ဖူးပေမယ့် သွားဖို့ စဉ်းစားထာတဲ့ နေရာထဲမှာပါတယ်။ ဒီလိုထောက်ပြပေးတာ သွားမယ့်လူတွေအတွက် သတိထားစရာရသလို [ ကိုယ်တိုင်တော့ မသွားတော့ဘူးလို့ မဆုံးဖြတ်မိဘူးး) လောလောဆယ် တဆိုင်တည်းရှိသေးတာကိုး ] ဆိုင်ရှင်အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။ ခံရတာကိုဒီလို မချပြပဲ ကြိတ်နေတဲ့လူတွေများလာရင် ဆိုင်ရှင်အတွက် ပိုပြီး နစ်နာပါတယ်။
City Hall က မြန်မာဆိုင် တော်တော်များများလည်း အဲလိုပါပဲ။ သုံးထပ်က ဈေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆို ဘယ်ဟာက ဘယ်လောက်ဆိုတာ တွက်မပြဘဲ total ကို တန်းရှင်းခိုင်းတယ်။ ပစ္စည်းထည့်ဖို့ ထားတဲ့ခြင်းတွေစီတာကို ခြေထောက်နဲ့စီတယ်။
လူကိုပြောတာလည်း ဟေ့ကောင်၊ ဟေ့ကောင်နဲ့ လေးစားမှုမရှိဘူး။
Customer Service ဆိုတာ နားမလည်တာလား မကျင့်သုံးချင်ကြတာလားမသိ။
9/13/2010 11:08 AM
ပန်နစူလားပေါ်က ဆိုင်တွေကိုလာရင် ကိုယ့်မာနနဲ့ ဒေါသတွေကို ခ၀ါချသွားရတယ် အစ်ကိုရေ... တစ်ခုချင်း ဈေးမေးရင်လဲ မကြိုက်ချင်သေးဘူး... ဟိုနေ့ကတစ်ဆိုင်က အထဲမှာ လူလေး နည်းနည်းရှိတာ မုန့်ရောက်လာ...ဖို့ ၁နာရီလောက်စောင့်လိုက်လို့ ကောင်တာသွားမေးတော့မှ မှာထားတဲ့ Receipt လေးက ကောင်တာပေါ်ကနေ နောက်ဖေးတောင် အော်ဒါကမရောက်သေးဘူး... အဲဒါလဲ Sorry တစ်လုံးမပြောဘူး..
အဲနောက်တစ်ဆိုင်ကျတော့လဲ ကာစတန်မာ ထိုင်နေတာကို ဘေးကနေ ခုံပေါ်မတ်တပ်ရပ်ပြီး အပေါ်ဘီရိုထဲက ပစ္စည်းကို ခေါင်းပေါ်ကနေ ထုတ်တယ်... သူ့စကပ်က ခေါင်းပေါ်လေ၀ဲနေတယ်...
၁ဆိုင်ချင်း နာမည်တွေပြောလိုက်ရရင်... အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ်... လွတ်တဲ့ဆိုင်က ခပ်ရှားရှား.... ကိုယ့်မှာပဲ ပြဿနာရှိနေတာလားလို့တွေးမိတယ်... ခုတော့ အဖော်ရှိလို့ အားရှိရတယ်...
9/13/2010 11:17 AM
ဒါမျိုးတွေ ကြာပေါ့ ညီမရယ်။
ဒါကြောင့် အစ်ကိုဆို ရေးဖူးပါတယ်။ မြန်မာပီပီ မြန်မာဆိုင်တွေကို အားပေးချင်ပေမဲ့ ဒါလို အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့် မသွားဘူးကွာ။ မြန်မာဆိုင်မှာ မစားရ ၊ မသောက်ရ ၊ မဝယ်ရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းမို့ အားပေးတာ သူတို့က အပြင်ဆိုင်တွေထက် ပိုတင်ရိုက်တယ်။ နေပါစေ လုံးဝကို မဝယ်မဖြစ် ပစ္စည်းက လွဲပြီး မဝယ်ဘူး မသွားဘူး။ အေးဆေးပဲ။ သွားရင်လည်း အခုလို မဖြစ်အောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ ဈေးမေးပြီးမှ ဝယ်တယ်။ မဖြေဘူး ၊ မကျေနပ်ဘူးဆို အဲဒီနေရာမှတင် ချထားခဲ့တာ သူ့ဖာသာ ပြန်စီပေါ့။ ပြဿနာရှာလို့ ပြဿနာ တတ်ရင် သူတို့က ဆိုင်ပိတ်ရမှာ ဒါကို ကိုယ်က သိထားတယ်လေ။ သူတို့တောင်မှ မလေးစားရင် ကိုယ်က ဘာမတိုင်ရဲစရာ ရှိလို့လဲ။ ပြုံးနေလိုက်ရုံပေါ့။
Thel Thel and Ko Ko said...
ဟုတ်ပ မဗေဒါရေ။ Peninsula မှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသေးတယ်။ စားလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ ရောင်းတဲ့လူမျက်နှာထားက တစ်လောကလုံးသူ့လုပ်စာ ထိုင်စားနေတဲ့ရုပ်မျိုးနဲ့။ ဇွန်းလေးတောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုမေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ဖြေချင်သလို မဖြေချင်သလို၊ စကားပြောချင်သလို မပြောချင်သလိုနဲ့။ ကိုယ်ကတော့ လူကြီးမို့လို့ မြန်မာပုံစံလေး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ စကားပြောရင် ရုပ်ခွက်ကိုက သူ့အိမ်မှာ အလကားလာတက်စားနေတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့။ အမြင်ကက်လို့ သွားမစားတာတောင် ၁နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ မဗေဒါပြောသလိုပဲ ban ထားလိုက်တယ်ပေါ့။
9/13/2010 12:47 PM
နောက်တခေါက် သွားအကဲခတ်ကြရအောင်လေ...နော် သယ်ရင်း
9/13/2010 1:01 PM
peninsula ဆိုင်တွေကို စိတ်နာနေတဲ့ အဖော်ရှိကြောင်း လာအကြောင်းကြားပါတယ်။
ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတဲ့ဆိုင်များလွန်းလို့ အဆင်ပြေတဲ့ဆိုင် (အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ ဆားဗစ်ကောင်းတဲ့ထဲ မရောက်သေးဘူး၊ လူကို မတူမတန်သလို မဆက်ဆံတဲ့ဆိုင်) ၃ ဆိုင်လောက်မှာပဲ ဝယ်ဖြစ်တယ်။ ငွေလွဲတာလဲ အဲဒီဆိုင်တွေမှာ ဈေးနည်းရင်တောင် ဈေးပိုပေးတဲ့ဆိုင်မှာ စိတ်မတိုချင်လို့လို့ အဲဒီကပဲ လွှဲတော့တယ်။
9/13/2010 2:38 PM
Thel Thel and Ko Ko
ကြည့်ရတာ သဲသဲနဲ့ကိုကို ပြောတဲ့ဆိုင်ကို မဗေဒါ သိတယ်ထင်တယ်... မဗေဒါ ဘမ်းထားတဲ့ဆိုင်လဲ အဲဒိဆိုင်ပဲ... အဲဒိ အဘိုးကြီးပဲ... လူကို အော်ငေါက်တာများ မသိရင် ထောင်ကန်တီးက မုန့်ထည့်ပေးတဲ့လူကျနေတာပဲ... (ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တွေ့ဖူးတဲ့ ထောင်ကန်တီးကလူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောတာပါ.. ကိုယ်ရောက်ဖူးတာမဟုတ်... ဟီး) ကိုယ်လဲ ဘမ်းထားတယ်... သူတို့ဆိုင်ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ်... ဘယ်လောက်ထိုင်လို့ကောင်းကောင်း... ဘာတီဗွီကြီးတွေပဲ တပ်ထားထား... ကိုယ်တို့က လုံးဝပဲ...
ဟုတ်ပါ့... မှန်ပါ့... ဒါမျိုးပဲဖြစ်သင့်တယ်...
Firstly, let me apologize before writing for not in burmese fonts since mine doesn't have it installed and I am not quite familiar with it too.
Okay, I amafriend of one of the shared owners of the ktv and helped them asavolunteer when they started. So I hope I can share my opinions with you here, not just defending like fanboys over their friends because the facts you said are not blindly telling, in fact they are truths, well, at least partially.
မန်မာဆိုင်ဆိုပြီး အားပေးကြလို့ မြန်မာ Customer ဆိုပြီး ဒီလို service မျိုးပဲပေးတာလား...
Absolutely not. Why? Coz they are targeting Myanmar audience and you can know since looking at the signboard and I can tell you, more than 90% is Myanmar.
This is 100% wrong thought as aforementioned, targeted audience is myanmar and how come they gonna be thinking like this?
Think twice! Look back to the golden oldies, Yadana, Taw Win, etc. started money transmittance in Singapore and success was HUGE. Now how many shops doing(following) the same kind of business ?
မင်းတို့ ငါတို့ဆိုင်နောက်မလာလို့လဲ ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့ဆိုင်မှာ လူတွေနေ့တိုင်းပြည့်လို့ သီချင်းဆိုဖို့ booking လုပ်ရတယ်... အချိန် Extend တိုးချင်လို့တောင်မရဘူး နောက်လူစောင့်နေရတဲ့အထိ ရောင်းကောင်းတယ်လို့များ မထိမဲ့မြင် အပြုံးပြုံးနေမလား...
Nonesense and so, no comments !
Okay, I let my friend read this blog and what he said is only one thing => Not Enough Manpower. Balancing income profit and expenses for resources is still finding way for settled down. The origin of this very bad experience is in fact stem from not having experienced waitering stuff for customers. Instead of whysss, long story short, misunderstanding between the shop manager and the new waitress led to the customer's negative feedbacks. Accepted, done.
So, on behalf of my friend, let me say that
thank you so much for your excellent feedbacks with detailed explanation for what happend and how to improve. Feedbacks (especially negatives) are really wanted so every aspect of the shop can be improved over time.
Deeply apologize for this very bad experience and let us (not me, the owners) knowaway to pay you back something like discounts (asareward) for what you lost and also for your feedback.
9/13/2010 11:35 PM
Hiafriend of one of the shared holders,
I am glad that you apologize for this matter on behalf of your friend. Thanks for explaining with all those reasons for me to understand even though it is not what I care for but as in polite manner, you did need to tell me the reasons. All I wanted was justasincere apology and I've got it now. :)
I accepted your apologies. Actually, I was quite convince when my sister said she's gotacalled from Steven last evening and he will sent an mail. I was waiting for the mail and trying to post about that on my blog too. But now I will writeapost with his sms showing his sincere apology and tell the world that "Cherry May" hasaresponsible and reliable Boss.
About all those things You copied down and explained one by one are actually the thought of customer who was treated badly but without any apologies and lost faith in "Cherry May". Everyone who was treated that way might wonder their thinking around like that since almost all the shops in Peninsula treated badly to us,Myanmar Customer, that way including the shops you mention above. When I think twice just as you advise, one of them is the worst.
You said those are "Nonsenses". All I want to reply you is "Yes, Customer's thinking can go to that extent when they were treated that way." You don't need to explain all those one by one as all those can be proven with better service in time.
I have mentioned in my post that "ဒါပေမဲ့ အဲဒါမျိုးအတွေးမျိုးကို အဲဒိ ဆိုင်သားတွေ တွေးချင်တွေးမယ် ဆိုင်ရှင်ကတော့မတွေးလောက်ဘူး". I did try to rationalize my thinking.
As you can see above comments of others, they also have the same opinion on giving us bad service just because we are Myanmar. (what i am talking is base on over all attitude of Myanmar shops from peninsula). Even though they understand their target audience well, they still giving bad attitude service to customer which is why we had this kind of thinking. I believe you are aware of all those shop attitude in Peninsula since you might also be customer to those shops.
If you understand your target audience and value them, we will definitely have faith in your shop. Actually I was thinking this shop will be different from those oldies shops since this shop was established by group of young people. I hadahigh expectation. It was hurt to be treated that way while I hoped "Cherry May" is difference.
Anyway, I am glad to know that "Cherry May" care for their customer and you guys are working on to improve the service. All those apologies I have received directly and indirectly showing that "Cherry May" is different from others. We(me and all those Myanmar customer out there) will continues watching the "Cherry May". Hope you will be an example of what called "Best Service" to others shop and can change our point of views.
As for the reward, I hope you guys will provide better and outstanding service with the respects and responsibilities to customers in future and maintain it.
9/14/2010 2:20 AM
"ငွေလွဲတွေက ပိုဆိုးသေး သူတို့မျက်နှာကြည့် လွဲနေရတယ် ခပ်မာမာဘဲ " :)
9/14/2010 3:59 PM
we banned oriental house restaurant from city hall bcoz of its service. So rude staffs and unresponsible managers. Serve with rude customer service in front of foreign friends and let them think myanmar are that kind of people. We never eat at there from last year..
10/26/2010 9:43 PM